IYunivesithi yaseMichigan GPA, i-SAT Score kunye noMTHETHO I-Scores
Funda ngeMichigan kunye ne-GPA, iSAT kunye ne-ACT Scores Uyakufuna ukungena
IYunivesithi yaseMichigan yayinomlinganiselo wokwamkelwa kweepesenti ezingama-29 ngo-2016; Ukwamkelwa kwesikolo kukukhetha kakhulu, kwaye abafaki zicelo baya kufuna amanani kunye neemvavanyo zokulinganisa eziqhelekileyo eziphezulu ngaphezu komyinge ukuba zivunywe. Iyunivesithi ibhekiselele kumanyathelo angenakubalwa njengengqinisiso, imisebenzi yangaphandle, kunye neencwadana zokucebisa.
Kutheni Unokukhetha iYunivesithi yaseMichigan
Efumaneka ku-Ann Arbor Michigan, iYunivesithi yaseMichigan ihlala ibhala njengenye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu kweli lizwe, kwaye iyona ekhethwa kakhulu kwiiyunivesithi zikarhulumente zase-Michigan. IYunivesithi inomzimba wabafundi abanamakhono athile-abafundi abayi-25% abavunyelwe ukuba babe ne-4.0 ye-GPA esikolweni esiphakeme. Isikolo sinokuziqhayisa ngeenkqubo zemidlalo ezivelele njengelungu leNkomfa Enkulu Yezigidi . Ngabafundi abangaphezulu kwama-44,000 kunye ne-200 ye-grade-grade schoors, iYunivesithi yaseMichigan inamandla kwiindawo ezahlukeneyo zemfundo. Iiprogram zezobugcisa kunye neenzululwazi ezinamandla zathola isahluko se- Phi Beta Kappa .
Kumele ukuba kuza kumangaliswa kukuba iYunivesithi yaseMichigan yenza uluhlu lwethu lweekholeji zaseMidwest kunye neeKholeji eziphezulu zaseMichigan . Amandla afanelekileyo esikolweni nawo ayenayo indawo phakathi kwezikolo zobunjineli kunye nezikolo zoshishino eziphezulu .
Michigan GPA, SAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi yaseMichigan i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Jonga i-graph yesikhathi sangempela uze ubale amathuba okungena kwiCapepex.com.
Ingxoxo yemiGangatho yokuVunywa kweMichigan:
Ngaphantsi kwesithathu kwisicelo sabangene izicelo, iYunivesithi yaseMichigan enye yeyunivesithi ephakamileyo yelizwe. Kwigrafu apha ngasentla, eluhlaza kunye nolubhakabhaka bamele abafundi abamkelweyo. Njengoko ubona, uninzi lwabafundi abamkelekileyo baneGPA yeB + okanye ngaphezulu, amanqaku eSAT (i-RW + M) ngaphezulu kwe-1100, kunye nemilinganiselo ye-ACT engama-23 okanye ngaphezulu. Ithuba lakho lokumkelwa liye lenyuka kakhulu njengoko loo manani enyukela. Ubuninzi bobuninzi beenkcukacha zegrafu kubafundi abafumana i-1300 okanye ngaphezulu kwi-SAT kunye no-28 okanye ngaphezulu kwi-ACT. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba amanqaku aphezulu okuvavanya kunye ne "A" ayingqiniswanga ayiqinisekisile ileta yokuwamkela. Efihlakele phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza kwigrafu baninzi abomvu - abafundi abathile abanokuziqhayisa ngamanyathelo amanani amaninzi afunyanwe kwiYunivesithi yaseMichigan. Legrafu yedata ye-University of Michigan yokukhanyela ibonakala ibonakale yonke ebomvu emva kohlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza ngaphezu.
Ngakolunye uhlangothi, inani labafundi lamukelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku athile ngaphantsi kwesiqhelo. IYunivesithi yaseMichigan isebenzisa iSicelo esisisigxina kwaye idibene ngokupheleleyo , ngoko ke amagosa avunyelwe ukuba acingisise ulwazi kunye nolwazi olunomlinganiselo. Abafundi abonisa uhlobo oluthile lokuthabatha italente okanye ukuba nebali eliphosakeleyo ukulixelela liya kubakho ukujonga ngokuthe ngangoko nokuba amabala kunye neemvavanyo zokuvavanya azange zifikelele. Incoko eyinqobileyo , iincwadi ezinamandla ezincomekayo , kunye nemisebenzi enomdla kwintsebenzo yecandelo elongezelelweyo yonke ifake isandla kwisicelo esiyimpumelelo. Uyakufuna kwakhona ukunyamekela kwiIyunivesithi yaseMichigan iincwadana ezongezelelweyo zeSicelo esisisigxina. Ezi zincoko ziquka impendulo engama-500 (okanye ngaphantsi) kumbuzo malunga nezizathu ezithile zokuba unomdla kwiyunivesithi. Qinisekisa ukuba impendulo yakho iphenywe kakuhle kwaye ichazwe kuMichigan. Ukuba ubhala impendulo yomntu onokuthi ungeniswe kuyo nayiphi na isikolo, ulahlekelwe ithuba lokubonisa umdla wakho ngendlela enentsingiselo.
Abafundi abasebenzisa i-Taubman College of Architecture kunye noCwangciso lweeNdawo, iPenny W. Stamps School of Art & Design, okanye iSchool of Music, iTheater & Dance iya kuba neemfuno ezongezelelweyo zesicelo.
IYunivesithi yaseMichigan Ukwamkela: iipesenti ezingama-29
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 640/730
ISAT Math: 670/770
UMSEBENZI IsiNgesi: 29/34
UMTHETHO UMathe: 27/33
I-University of Michigan Admissions Data kubafundi abalahliweyo
IYunivesithi yaseMichigan i-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQhathaniswa nabaFundiweyo abaFundiweyo. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ngenxa yokuba iYunivesithi yaseMichigan ikhetha ngokukhethekileyo kwaye iyakwamkelwa ngokubanzi, amanqaku aphezulu kunye namanqaku okuvavanya akaqinisekisi ukungena. Kwigrafu yeCapepex ngasentla, yonke idatha yabafundi abangenayo kunye nabalindelweyo isusiwe ukwenza uluhlu lwemininingwane yeGPA, i-SAT kunye ne-ACT kubafundi abanqatshelwe ngakumbi. Ukuba ungumfundi onamandla kakhulu, ungavumeli le grafu ikukhusekise, kodwa kufuneka ibe yisesheke yangempela. Abafundi abambalwa abanomlinganiselo oqinileyo "A" kunye ne-SAT / ACT amanqaku aphezulu ngaphezu komyinge angangeni kwiYunivesithi yaseMichigan. Kungcono kakhulu ukujonga i-yuyunivesithi ukuya esikolweni , kwaye uya kufuna ukufaka isicelo kwezinye izikolo ezinomgca we-bar yokungeniswa kwezantsi ukuze uqinisekise ukuba ufumene iileta ezamkelekileyo.
IYunivesithi yaseMichigan Information
Imigangatho yokwamkelwa kweyunivesiti yinto enye yecandelo lokulinganisa iikholeji. Njengoko uhlakulela uluhlu lwakho lwenqweno yekolishi , uya kufuna ukucinga ezinye izinto ezifana nexabiso, izifundo kunye nobomi bomfundi.
Ubhaliso lwabonke: 44,718 (28,983 abagqwesileyo)
Ukuhlukana kwesini: 50% Amadoda / 50% Amadoda
Imfundo kunye neMali: i-14,402 ye-$ (in-state); $ 45,410 (ngaphandle kwe-state)
Iincwadi: $ 1,048 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 10,872
Ezinye iindleko: $ 2,454
Iindleko ezipheleleyo: $ 28,776 (kwi-state); I $ 59,784 (ngaphandle kwe-state)
Uncedo lwezeMichigan eMichigan (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abafumana uncedo: ama-64 ekhulwini
Imali: ipesenti ezingama-29
Izibonelelo: $ 16,865
Imali: $ 6,950
I-Popular Majors: I- Biology, uLawulo lwezoShishino, i-Economics, isiNgesi, iMbali, Ubunjineli boMbane, uLondolozi, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology
Ukugcinwa kwabafundi be-First Year (abafundi bexesha elipheleleyo): iipesenti ezingama-97
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-6: ipesenti ezingama-91
Ezemidlalo zaMadoda: I- Lacrosse, i-Gymnastics, Ibhola, ibhola, ibhola yebhola, ukulwa, ukubhukuda, ithenti, iHockey iHockey
Ezemidlalo zaBasetyhini: IHockey yeHlabathi, UkuHlaba, iNgcahla, Umkhondo kunye neNdawo, iVolleyball, iPolo yamanzi, UkuBhukuda, iSoftball
Ukuba Uthanda iYunivesithi yaseMichigan, Unako ukufana nalezi zikolo
Abafundi abathandwa kwiYunivesithi yaseMichigan bahlala befuna iinqununu ezinkulu, ezikhethiweyo, ezipheleleyo. Phakathi kwamaziko karhulumente, abafakizicelo eMichigan bahlala becinga iYunivesithi yaseMichigan State, iYunivesithi yase- Ohio State kunye neYunivesithi yasePurdue . Ngaphambili, u- UC Berkeley , u- UCLA , kunye neYunivesithi yaseVirginia nabo bayathandwa.
Xa kuziwa kwiiyunivesithi ezizimeleyo, abafaki-zicelo bavame ukubonisa umdla kwiYunivesithi yaseBoston, kwiYunivesithi yaseCarnegie Mellon , naseYunivesithi yaseChicago . Qaphela ukuba iYunivesithi yaseMichigan enye yeyunivesithi ephakamileyo ephakamileyo kweli lizwe, ngoko ke ulwahlulo lweendleko phakathi kwamaziko karhulumente kunye nolwangasese alunakubaluleka. Oku kunjalo ngokukodwa kubafakizicelo bezizwe kunye nalabo abafanelekayo ukufumana uncedo lwezemali.
Ikholeji entsha ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
UC Merced GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
Amaqiniso Anomdla NgamaCentipedes
Indlela yokufumana i-Redfish
Amathuba kunye nePunnett Squares kwi-Genetics
Ukuhlaziywa koMdlalo wokuTlola
Imfesane ngokubhekiselele kuBulungisa: iClash of Virtues
Ngaba Uyafuna Ukucofa "Inkcazo" Ecacileyo Emva kokuhlawula kwiPompe yeGesi?